Hoggantoonnii fi miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee sochii “Poostaa Adii gara Masaraa Adiitti’’ jedhuurratti hirmaatan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Hoggantoonnii fi miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee sochii “Poostaa Adii gara Masaraa Adiitti’’ jedhuurratti hirmaatan
On Sep 18, 2021 114
Finfinnee, Fulbaana 8, 2014 ( FBC)- Hoggantoonnii fi miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee sochii “Poostaa Adii gara Masaraa Adiitti’’ jedhuurratti hirmaataniru.
Sochii kanaanis dhugaa Ityoophiyaan qabdu hawaasa idil addunyaaf beeksisuuf sochicharratti hirmaachuu ibsameera.
Gareen shororkeessaa ABUT Ityoophiyaa diiguuf daa’immaan waraanaaf hiriirsuun miidhaa hedduu namoomaa fi meeshaalee qaqqabsiisuun lammiilee lakkoofsaan heddumaataan qe’ee fi qabeenyaasiirra buqqisaa jira.
Yaa ta’uu malee hawaasni idil addunyaa fi dhaabbilee midiiya idil addunyaa tokko tokkoo gocha badii garichaa mormuudhiisanii bifa dogoogoraa ta’een dhugaasaa hubachuu dhabuun Ityoophiyaarratti miidhaa qaqqabsiisuuf tattaaffii taasisaa jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera.
Kana bu’uureeffachuun hoggantoonnii fi miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee sochii “Poostaa Adii gara Masaraa Adiitti’’ jedhuurratti hirmaachuu ragaan Poolisii magaalaa Finfinneerra argamee ni muul’dhisa.